खाजा पसल भन्दै पोखराका चोक चोकमा यस्तो यौन धन्दा, के रेडलाइट खोजेकै हो पोखराले ? (भिडियो सहीत) – PathivaraOnline
Home > समाचार > खाजा पसल भन्दै पोखराका चोक चोकमा यस्तो यौन धन्दा, के रेडलाइट खोजेकै हो पोखराले ? (भिडियो सहीत)
पोखराका चोक–चोकमा खुलेआम यौन धन्दा हुने गरेको पाइएको छ । बिभिन्न खाजा पसल र होटलको नाममा यौन धन्दा हुने गरेको गण्डकी टेलिभिजनको कार्यक्रम गण्डकी छड्केले सार्वजनिक गरेको छ । यद्यपी प्रहरीले यौनकर्मी र तिनका दलाल लाई पक्राउ गरेर मात्र समस्याको समाधान नहुने तर्फ गण्डकी छड्लेले इंकित गरेको छ ।
प्रहरीले यो धन्दा रोक्न नसक्ने नै भएपछी यसलाई ब्यबस्थीत गर्दा के हुन्छ ? कार्यक्रमले प्रश्न गरेको छ । के पोखरालाई रेडलाइट एरियाको जरुरी परेकै हो त ? यस बिषयमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको जवाफ समेत मागिएको छ । कृपया तलको पुरा कार्यक्रम हेर्नुहोस
छोराले बुवाको शवलाई बीएमडब्ल्यु कारभित्र राखेर गाडे – यस्तो छ चकित पार्ने कारण
पति गुमाएकी सांसद विमला वलीले सिन्दुर लगाएर वाइसिएलका युवालाई चु म्मन गरेको तस्वीर सार्वजनिक ? के हो बास्तविकता ?